VAIA70000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၇၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 70000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA70000
On the market today, there are many enterprises providing water purification products, but with the 7000LPH VAIA7000 Purified Water Filtration System of Viet An is still trusted by many customers.
ယနေ့ခေတ် ဈေးကွက်မှာ ရေသန့်စင်စက်တွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဝယ်ယူသူတွေက 70000LPH VAIA70000 ရေစစ်ကို ယခုအချိန်ထိ ယုံကြည်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Collective image of Viet An company Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့လိုက်ပုံ
Viet An always buildsabrand with the quality and trust of customers, constantly updates new technologies, improves service quality to bring customers the most satisfaction.
Viet An မှ ပစ္စည်းရဲ့ ကွာလတီ၊ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ တံဆိပ်ကို တည်ဆောက်ပါတယ်။ နည်းပညာအသစ်တွေ အဆင့်မြှင့်တင်တယ်။ ဝယ်ယူသူတွေ စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေဖို့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။
Over nearly 20 years of construction and development, Viet An General Trading Joint Stock Company has provided, constructed and installed water purification systems for many major partners such as Kim Boi - Hoa mineral water company. Binh, Diana, Samsung ....
နှစ် ၂၀ ကျော် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေအရ Viet An မှ Kim Boi- Hoa ရေသန့်ကုမ္ပဏီ၊ Binh၊ Diana၊ Samsung စတဲ့ ပါတနာတွေအတွက် ရေသန့်စက်တွေ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
If you are looking to buyasystem with high capacity water filtration capacity, the output water quality meets the standards, the 7000LPH VAIA7000 Purified Water Filtration System is the choice that should not be missed.
တကယ်လို့သင်က ရေစစ်နိုင်စွမ်းမြင့်ပြီး စစ်ထုတ်ပြီးတဲ့ရေက စံချိန်စံနှုန်းတွေ ကိုက်ညီနေစေချင်တယ်ဆိုရင် 70000LPH VAIA70000 စက်က သင်လုံးဝကို ရွေးချယ်သင့်ပါတဲ့ စက်ပါပဲ။
70000 liter/h stainless steel autovan purified water filtration system the perfect choice for you
တစ်နာရီမှာ ၇၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဒီစက်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
It can be said that to buyamachine capable of purifying clean water is not difficult because there are currently many devices from many different brands corresponding to different prices. However, with the special features, unique to Viet An brand products, you will not be able to ignore our machine:
ရေသန့်စင်ပေးတဲံ စက်ကို ဝယ်ယူရတာ မခက်ခဲဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဈေးနှုန်းအမျိူးမျိုးနဲ့ ရေစစ်တွေ အရမ်းပေါများလာလို့ပါ။ သို့သော်လည်း စပါယ်ရှယ် လက္ခဏာတွေပါတဲ့ Viet An တံဆိပ် ပစ္စည်းတွေကိုတော့ သင်လျစ်လျူမရှုသင့်ပါဘူး။
Affordable prices, our product lines are often lower than the common ground of other brands but the functions and quality are always excellent.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက လူအများတတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ ဖြစ်ကြပြီး လုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ ကွာလတီက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Commitment to genuine products, the number 1 prestigious warranty in Vietnam along with the most attentive, enthusiastic and professional customer care services.
ဗီယက်နမ်မှာ စစ်မှန်သော ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း အာမခံတဲ့ နံပါတ် ၁ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အာမခံချက်ပေးပါတယ်။ထို့အပြင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သော ဝယ်ယူသူတွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Assembled at Quang Minh factory - where there are modern, specialized equipment for the refrigeration industry and components of the 70000 liter/h autoval stainless steel purification line are mostly imported from other countries. excellent industry in the world such as UK, USA, Korea, ...
ခေတ်မီတဲ့ စက်ကိရိယာတွေ ရှိတဲ့ Quang Minh စက်ရုံမှာ တပ်ဆင်ပြီး တစ်နာရီမှာ ၇၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဒီစက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို UK USA Korea စတဲ့ နိုင်ငံများမှ စက်ရုံတွေကနေ တင်သွင်းပါတယ်။
The machine hasacompact design, delicate, high aesthetics because it is made of 304 stainless steel, which helps to limit corrosion over time, and is flexible in installation and transportation.
ဒီစက်ကို တိုက်စားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် လှပနူးညံ့ပြီး သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင် တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူပါတယ်။
The valve system automatically switches off the water flow so businesses and business households will savealot of money and be safe to use.
အဆို့စနစ်က ရေစီးဆင်းမှုကို အော်တိုပိတ်ပေးတာကြောင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရော အိမ်သုံးအတွက်ရော ပိုက်ဆံချွေတာနိုင်ပြီး အသုံးပြုရတာ လုံခြုံပါတယ်။
The difference in the principle of water filtration of 7000LPH VAIA7000 Purified Water Filtration System
70000LPH VAIA70000 ရေစစ် စည်းမျဉ်းရဲ့ ကွာခြားချက်
Operates on the principle of reverse osmosis, which is far from the usual filtration principles applied to other water purification equipment. 7000LPH VAIA7000 Purified Water Filtration System filters water on the principle of reverse osmosis.
အခြားပစ္စည်းတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မတူဘဲ ပြောင်းပြန်အိုစမိုးစစ်စည်းမျဉ်းကို အသုံးပြုပါတယ်။ 70000LPH VAIA70000 ရေစစ်က ပြောင်းပြန်အိုစမိုးစစ် စည်းမျဉ်းနဲ့ လည်ပတ်ပါတယ်။
Reverse osmosis (RO) was invented and researched since the 50s and fully developed in the 70s of the 20th century.
ဒီနည်းလမ်းကို 50s ကတည်းက ရှာဖွေ တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀ ရာစုရဲ့ 70s ရောက်မှသာ တိုးတက်လာပါတယ်။
To understand why this technology works according to the above mechanism, let's find out what "osmosis" is. Forasimple experiment, we put on the left isapurified water bottle, one side isabrine solution, and two bottles are separated byasemi-permeable filter. We notice that the water level in the left vessel is significantly reduced due to the water being transferred to the right vessel. This is the osmosis process.
ဒီနည်လမ်းက ဘာကြောင့် အပေါ်က စက်ယန္တရားအတိုင်း အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ နားလည်ဖို့ အိုစမိုးစစ်ဆိုတာ ဘာလဲ အဖြေရှာကြရအောင်။ ရိုးရှင်းတဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ဘယ်ဘက်မှာ ရေသန့်ဘူးထားပြီး ညာဘက်မှာ ပင်လယ်ရေ ထားပါမယ်။ ဒီဘူးနှစ်ခုလုံးကို တဝက်စိမ့်ဝင်သော ရေစစ်နဲ့ ခြားထားပါမယ်။ ဘယ်ဘက်က ရေတွေက ညာဘက်ပုလင်းထဲ အပြောင်းခံရတဲ့အတွက် သိသိသာသာ လျော့သွားပါတယ်။ ဒါက အိုစမိုးစစ် လုပ်ငန်းစဉ်ပါပဲ။
To do the opposite (reverse osmosis), people useastrong Full pressure to repel water fromaplace withahigh mineral salt content "permeates" through the filter toaplace where there is no or less mineral salt, isapurified water tank.
ပြောင်းပြန် အိုစမိုးစစ်ကို လုပ်ဖို့ လူတွေက ပြင်းထန်သော ဖိအားကို သုံးပြီး ဆားများစွာပျော်ဝင်နေတဲ့ ရေကို ဆားနည်းတဲ့နေရာသို့ စစ်ထုတ်ကြတယ်။ဒါက ရေသန့်တိုင်ကီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The RO water filter used in 7000LPH VAIA7000 Purified Water Filtration System is the best water filter available today.
70000LPH VAIA70000 ရေသန့်စက်မှာ သုံးထားတဲ့ RO ရေစစ်က ယနေ့ခေတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရေစစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
There is no transition phase in the separation of impurities, allowing the process to be carried out without much energy and water usage.
အညစ်အကြေးတွေကို ခွဲထုတ်တဲ့အခါ ကြားခံမရှိပါဘူး။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အင်နာဂျီအများကြီး မလိုအပ်ဘဲ ရေလည်း အရမ်းသုံးစရာမလိုဘဲ လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။
It can be done at normal room temperature, with little or no additional chemicals required.
အခန်းရဲ့ သာမာန်အပူချိန်မှာ လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ အခြား ဓာတုပစ္စည်းတွေ မလိုအပ်ပါဘူး။
Simple structure, long service life and easy to use and install, the price is not too high, suitable for many types of climates.
ရိုးရှင်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကြာရှည်သော ဝန်ဆောင်မှု၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူတယ်။ ဈေးလည်းမများဘူး။ ရာသီဥတု မျိုးစုံနဲ့ ကိုက်ညီတယ်။
With the requirements of water quality, RO membrane is commonly used in desalination, desalination, and demineralization to produce pure water, suitable for the 70,000 liter/h stainless steel purification line instead of ultrafiltration and microfiltration membranes to reduce environmental pollution.
ရေရဲ့ ကွာလတီ လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် RO အလွှာပါးကို ရေသန့် ထုတ်လုပ်ရန် သုံးပါတယ်။ ဒါက လွန်ကဲသော ရေစစ်၊ မိုက်ခရို ရေစစ်တွေထက် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အညစ်အကြေးကို လျှော့ချဖို့ တစ်နာရီမှာ ၇၀၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဒီရေသန့်စက်နဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
Used in clean water treatment systems for its ability to reduce mineral salt content, prevent useless organic substances.
ဆားပါဝင်မှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ရေသန့်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။
Operating Instructions 7000LPH VAIA7000 Purified Water Filtration System
70000LPH VAIA70000 ရေသန့်စက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံ လမ်းညွှန်ချက်များ
Test operation and carefully read the manual of Viet An to make the machine operate better, and ifaproblem is detected, you can immediately exchange it for free, saving you time.
လည်ပတ်ပုံကို စမ်းသပ်ပါ။ စက်ကို သေချာလည်ပတ်နိုင်ဖို့ လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို သေချာဖတ်ပါ။ ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ အလကားပြန်လဲနိုင်ပါတယ်။
If you haveaproblem or serious damage that cannot be fixed, you should immediately call the service center, do not repair yourself or follow the tips on the internet.
ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ ထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာကို ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် မပြင်ပါနဲ့။ ဒါမှမဟုတ် အင်တာန့်ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို လိုက်နာပါ။
On water source: source water quality hasavery important influence on the water treatment capacity of the 70,000 L/h stainless steel RO water purification system and the durability of components. Viet An advises customers to use tap water or well-filtered water to make the water cleaner, transparent, free of impurities, dirt, and health.
ရေအရင်းအမြစ်- ရေအရင်းအမြစ်ရဲ့ ကွာလတီကလည်း ရေကို ပြုပြင်တဲ့အခါ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ထို့အပြင် ရေသန့်စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ကြာရှည်ခံမှု စတာတွေအပေါ်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးမှု ရှိပါတယ်။ Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ဘုံပိုင်ရေ၊ တွင်းရေကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
Installation location: Note that the device should not be placed in places with high humidity, many surrounding obstacles, direct sunlight and narrow area areas that will affect performance.
တပ်ဆင်တဲ့ နေရာ- စက်ကို စိုစွတ်မှုများသော၊ ဘေးတွင် ပစ္စည်းတွေများသော၊ နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော၊ ကျဉ်းသော နေရာများတွင် မထားသင့်ပါဘူး။ စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်လို့ပါ။
Please contact us for advice and get the most reasonable machine. Thank you for your interest in stainless steel autovalve 7000LPH VAIA7000 Purified Water Filtration System.
အကြံဥာဏ် ရယူရန်နှင့် အသင့်တော်ဆုံးသော စက်ကို ဝယ်ယူဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ 70000LPH VAIA70000 စက်ကို စိတ်ဝင်စားပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
All these systems are available at our factories and branched nationwide. If you are interested in our products, just visit us at the below address:
ဒီစနစ်တွေအားလုံးကို နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်ရုံခွဲတွေအားလုံးမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်ပါလိပ်စာများဆီ လာရောက်လည်ပတ် နိုင်ပါတယ်။
Hanoi Branch: N. 10, N6 - Lane 40, Xuan La Street, Tay Ho District, Hanoi
Factory address: Lot 43, D1 Road H2-G2 Quang Minh - Me Linh - Hanoi Sai Gon branch: No. 40 Nguyen Anh Thu, Tan Chanh Hiep Ward, District No. 12, Ho Chi Minh
Da Nang Branch: No. 50 Phan Khoang, Phuoc Ly Resettlement Area Hoa An, Cam Le District, Da Nang city
Buon Me Thuot office: No. 87 Phan Huy Chu, Khanh Xuan Ward, Buon Ma Thuot City
Hanoi ရုံးခွဲ: N. 10, N6 – လမ်း 40, Xuan La လမ်း, Tay Ho ဒေသ, Hanoi
စက်ရုံလိပ်စာ: Lot 43, D1 လမ်း H2-G2 Quang Minh - Me Linh - Hanoi Sai Gon ရုံးခွဲ: No. 40 Nguyen Anh Thu, Tan Chanh Hiep ဆောင်, ဒေသ No. 12, Ho Chi Minh
Da Nang ရုံးခွဲ: No. 50 Phan Khoang, Phuoc Ly ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဧရိယာ Hoa An, Cam Le ဒေသ, Da Nang မြို့
Buon Me Thuot ရုံး: No. 87 Phan Huy Chu, Khanh Xuan ဆောင်, Buon Ma Thuot မြို့
1 Push pump with 304 Stainless steel head စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက်4unit Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ် 60 unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ 60 unit VA/ USApec
4 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ4Kg VA/ USApec
7 Autovalve အော်တိုအဆို့4unit VA/ USApec
8 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ4unit VA/ USApec
9 Autovalve အော်တိုအဆို့4unit VA/ USApec
11 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ4unit VA/ USApec
12 Autovalve အော်တိုအဆို့4unit VA/ USApec
14 40” PP Filter Cartridge ၄၀ 80 unit VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံးစစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်4unit VA/ USApec
16 304 stainless steel booster pump 304 စတိန်းလက်စ်စတီးအားပြင်းရေစုပ်စက်3unit Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ် 20 unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလွှာပါး 40 unit Hitech-USA/CSM Korea
19 Flowmeter စီးဆင်းသောမီတာ 8 unit Taiwan
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ 22 unit Taiwan
21 Oil pressure gauge ဆီဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ4unit Taiwan
22 Solenoid valve သံလိုက်အစို့4unit Cn Korea
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက် 24 unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 70000LPH VAIA70000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်